dia ace 11 ao blackjack
dia ace 2 3 4 5 mahitsy ao poker
Tamin'ny alatsinainy, ny Governora Jerry Volontany nanambara fa izy sy avaratra San Diego County ny Pala Tarika ny asa Fitoriana ny Karana no nanao sonia an-baovao-panjakana lalao voalamina tsara. Ny vaovao voalamina tsara supersedes ny talohan'ny fifanarahana nosoniavina nandritra ny folo taona lasa izay, ary tononiny ny miasa iombonana ny Pala Casino.
Ny teny ao amin'ny fifanarahana vaovao hampitomboana ny isan'ny slot milina tao amin'ny casino amin'ny 500 mihoatra noho ny talohan'ny voalamina tsara dia ace 1 na 11 any texas holdem. Raha ny foko izao, ary manana ny fahefana mba hiasa 2,500 slots, ny amin'izao fotoana izao amin'ny fotoana tsy manana drafitra mba ampio lalao fitaovana, araka ny filazan'ny mpitondra tenin'ny Jack Taylor dia ace 11 ao blackjack. Miaraka amin'ny vola miditra ny fizarana, ny fepetra ny voalamina tsara ny fonony fiaraha-mientana ifampizarana ho fanohanana ao an-toerana ny fahefana ho an'ny vonjy taitra tolotra ara-pitsaboana, ny afo, ny fampiharana ny lalàna, ny fanatsarana ny fotodrafitrasa, ny fanabeazana, ny transit-bahoaka, ary koa ireo tolotra hafa izay mikarakara ny fiaraha-monina ny zavatra ilaina, araka ny Governora Volontany ny birao dia ace 2 3 4 5 mahitsy ao poker. Tsy dia tafiditra ihany koa fa mampirisika ny tairina ny fampiasam-bola eo amin'ny angovo azo havaozina, ny rano tetikasa fiarovana ny tontolo iainana na ny fanodinana, ny fampandrosoana ara-toekarena tsy misy ny lalao ary foto-drafitrasa ara-pahasalamana izay ifanarahana mahasoa ny firenena ary koa ny fiaraha-monina.
Ny vola miditra ihany koa ny mbola ho izany hatrany, nizara ny Pala Tarika amin'ny tsy lalao foko, araka ny In San Diego hard rock casino biloxi ms jobs. Araka ny biraon'ny governora, ny vaovao voalamina tsara ao amin'ny fitandremana vao haingana ny fifanarahana izay efa nifampiraharaha tamin'ny foko hafa izay miasa trano filokana, ny mahasoa ny fifandraisana misy eo aminy sy ny fanjakana lalao dalàna, sy ny fomba matihanina ny foko no dalàna hard rock casino biloxi ms buffet. Ny foko vao ifanarahana voalamina tsara ny toetry ny California tonga herinandro vitsy monja talohan'ny Pala Casino ny Spa & Mampiasa ny horonan-taratasy avy ny vaovao $5.6 tapitrisa 10-acre RV fialan-Tsasatra.
Ny trano vaovao dia miorina amin'ny Lalambe 76 akaikin'ny hotel casino ary dia voalahatra ho misokatra ho an'ny raharaham-barotra ny 23 May, raha voamarina avy amin'ny casino hard rock casino biloxi ms restaurants. Ny vaovao RV Mampiasa endri-javatra maro be ny amenities, anisan'izany ny rendrarendra resort fatratra clubhouse ary mpikamban'ny faritra roa hafa trano filokana izay efa natokana RV foto-drafitrasa; ny BlueWater Resort sy ny Casino akaikin'ny Parker, Arizona sy ny natalie hills Resort & Casino akaikin'ny sor amnuaysirichoke..